Umfazi wasePisces ebhedini: Yintoni onokuyilindela nendlela yokwenza uthando - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Umfazi wasePisces ebhedini: Yintoni onokuyilindela nendlela yokwenza uthando
Umfazi wasePisces ebhedini: Yintoni onokuyilindela nendlela yokwenza uthando
Umfazi wasePisces unomoya ongaqondakaliyo, obhinqileyo owenza ukuba amadoda amfune kakubi. Uhlala emhle kwaye uyabawela abanxili ngomtsalane wakhe.
Eli nenekazi akufuneki lenze nantoni na ukufumana amadoda. Bonke baya kukhetha ukuba kunye naye ngokuzithandela. Ushiya uluvo lokuba kufuneka asindiswe yiNkosana eCharming kwaye unama-naivety amadoda amaninzi awatsala enomtsalane.
Ibhinqa lasePisces libonisa ubufazi ngayo yonke ipore emzimbeni wayo. Njengophawu lwamanzi olusekwe kwiimvakalelo, wenza uthando ngokunzulu kunye nentsingiselo. Uya kwenza uthando lwakho luzive luqhutywa ngamaza olwandle.
Ukusondelelana ngesondo nalo mfazi kwahlukile kwaye kukhethekile. Ukuba uziva ngathi ngandlela thile awonelisekanga ngumsebenzi wakhe ebhedini, uya kufunda into enokukukhathaza kwaye aqiniseke kwixesha elizayo ukuba wonwabile ngokupheleleyo.
Akukho nto imenza abe nomxholo ongaphezulu kokwazi ukuba unelisekile nge-100% ngokusebenza kwakhe ebhedini.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka ujonge kunye naye njengoko kunokubakho nzima xa kuvela ingxaki. Uya kuzihlukanisa nawe ukuba uziva ukuba akusekho ndawo yokunyamekela iimfuno zakhe.
Kwaye ngekhe uphinde uve kuye. Kunzima kakhulu ukubamba umfazi wePisces. Uza kutshata kube kanye, ke kufuneka umphathe ngononophelo, ahlangane neemvakalelo zakhe kwaye umthande kakhulu. Akenzi nje isondo xa esenza, ngumntu owenza uthando ngokunzulu.
Amava ahlukileyo ngokupheleleyo
Ukuba luphawu lokugqibela kwi-zodiac, iiPisces zidibanisa onke amandla ezesondo emiqondiso ngaphambili. Oku kuthetha ukuba inenekazi linamacala amaninzi ekwenzeni uthando.
Uyayithanda indima yokuthobela ebhedini. Yinkosazana elinde ikrele lazo kwizixhobo ezikhanyayo. Ukuba awuyazi indlela yokuziphatha naye, ungazikhathazi ngokuzama into.
Njengoko eneemvakalelo kuzo zonke ezinye iinkalo zobukho bakhe, umfazi wePisces naye uziva ngengxowa. Uya kuyikhanyisa ingcinga yakhe yokwenza iseto sothando sothando lwakho.
Amakhandlela anuka kamnandi kunye namagqabi aphakamileyo aya kuba kuyo yonke igumbi lakho lokulala Uthanda isondo kunye nezinto ezimangazayo. Kuye, ukuhlangana akuzihlukanisi nothando.
Kukunxibelelana okuqinileyo phakathi kwezi zimbini. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ukhetha indima yokuthobela nokuba ngumphi, hayi oyithathayo.
Uya kuvulelwa phantse kuyo yonke into kwigumbi lokulala kwaye uya kujongeka edibanisa ngengqondo neqabane xa esenza isondo. Abo baneNyanga kunye neplanethi kaMars ebekwe kulo mqondiso, ingakumbi ngolu hlobo.
Ukuqonda nokukhathalela, umfazi wePisces uya kumonakalisa kakhulu umntu amthandayo. Uya kuyinika yonke iminqweno yakhe kwaye umothuse ngemidlalo eyahlukeneyo yokulala.
Uhlawula uninzi lwento yonke ekwenzeni uthando kwaye ucinga ukuba i-foreplay ibaluleke kakhulu. Ukuba ukunye naye, qiniseka ukuba uyakonwabela ukubonwa kwangaphambili kwaye uyamncoma kakhulu.
Uya kuba liqabane elifanelekileyo kuwe ukuba uyakwazi ukumnika zonke ezi zinto. Ayisiyiyo eyokuba wonwabele isondo elirhabaxa, kuyakufuneka ube novakalelo kunye nothando xa usabelana ngesondo nowasetyhini wePisces.
Uya kwenza nantoni na eyimfuneko ukukukholisa. Ukwazi ukuba uyathandeka njani kumfana, eli nenekazi liyalukuhla kwaye kunzima ukulikholisa.
Akayi kulala nabani na njengoko ekhangela iqabane ukuze amenze azive kamnandi ngaphandle kwegumbi lokulala.
Xa belele ebhedini, abafazi bePisces basendle kwaye banomlilo, bahluke kakhulu kwindlela abaphila ngayo ebomini bokwenyani. Intombazana yePisces iyayithanda xa iqabane lilawula kuye kwaye yenziwe ukuba ithule. Njengazo naziphi na ezinye izinto zesini, uneengcinga kunye ne fetish.
Uthatha nje iintambo umbuze ukuba ufuna ntoni kwaye izinto kufuneka zihambe kakuhle. Utyekele ekuncamathiseleni umntu kubusuku bokuqala kunye.
Ukufumana kunye nokukhusela, umfazi wasePisces uya kuqaphela xa kukho into engalunganga kwindlela owenza ngayo uthando kuye.
Uya kulindela ukuhamba kwakho okulandelayo
Eli nenekazi elithanda ukumangaliswa kunye nokunconywa. Mthengele iimpahla zangaphantsi ezintsha okanye into yokudlala entsha enokumkholisa ngokwesondo. Ukuba uyazi ukuba zeziphi izipho zokumfumanela, ngokuqinisekileyo uya kuyiphumelela intliziyo yakhe ngokulula.
Ufikelela kwi-orgasms ngokukhawuleza kwaye une-libido ephezulu. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-foreplay ibalulekile kwintombazana esePisces. Ufuna ingqalelo kwaye asiwe kumlinganiso owahlukileyo xa usenza uthando.
Kuya kuba nethamsanqa ukuba nalo mfazi unomdla njengesithandwa sakho. Ekhululekile kwaye ezolile, usebenzisa isondo ukuze abaleke elona xesha lobomi linzima.
Uyayazi indlela yokwenza isondo ngomlomo kwindoda kwaye une-intuition emangalisayo. Oku kuthetha ukuba uya kuqikelela ukuba ungafuna ntoni ngaphandle kokucela.
Akathandi ukuba nguwe oleqayo, kungoko kufuneka ubengumntu ozokumrhuqa kwaye umse ebhedini. Cofa kuTwitter
Ukucinga kunye nobunzulu, kunzima kakhulu ukulibala ukuba umfazi wePisces wenza njani uthando.
Njengomlingani wakhe oyindoda, akazukuvumela umntu angamthembiyo kwigumbi lakhe lokulala. Iimpawu apho ahambelana khona ngokwesondo ziiVirgo, iTaurus, iCancer, iScorpio, kunye neCapricorn. Indawo yakhe ene-erogenous ziinyawo zakhe.
Unobufazi awukho omnye umqondiso kwaye uthatha inxaxheba kuyo yonke into iqabane lakhe limbuza ukuba ayenze kwigumbi lokulala. Ukuba uyahlonitshwa kwaye uyathandwa, uya kwanelisa nayiphi na into emnandi.
yintoni etsala indoda capricorn
Kulula ukuba umfazi wePisces awe kumntu ongamhloniphi ngokwaneleyo. Uthandana ngokulula kwaye rhoqo nomntu ongalunganga. Xa eqonda ukuba izinto azikho njengoko ezijonga, uqala ukukhathazeka kunye nomsindo.
Kodwa ukuba ukunye nomntu ofanelekileyo, le ntombazana iya kudlala nayiphi na indima xa usabelana ngesondo. Ungumntu othetha kakuhle, ngoko iwayini enhle kunye nomculo othile uya kumjika ngokukhawuleza. Ukudlala ngothando ngokudibana nesondo emva komtshato yinto anokuyenza ngaphandle kokuthandabuza.
I-Pisces yesini: Izinto ezibalulekileyo kwiPisces ebhedini
Ukuthandana Umfazi wePisces: Izinto Ofanele Uzazi
Ngaba amaPisces Abasetyhini banomona kwaye banako?
Iimpawu zabafazi basePisces kuThando, uMsebenzi kunye noBomi
Iimpawu eziphambili zoMqondiso weSinyithi weTshayina weZodiac
NgoFebruwari 4 Imihla yokuzalwa
ngabaxoki kunye nabakhohlisi
Indoda eyi-virgo iyawukhathalela umtshato wabasetyhini
Iminyaka eli-18 (julayi 4, 1998)
indoda ye-taurus kunye nebhinqa le-gemini luthanda ukuhambelana
8/23 uphawu lweenkwenkwezi
Indoda eyi-aries kunye ne-pisces yomfazi iyakuthanda ukuhambelana